Iyo Baztán Trilogy, inyanzvi yaDolores Redondo. | Zvazvino Zvinyorwa
Iyo Baztán Trilogy
Mabhuku eBaztán Trilogy.
Iyo Baztán Trilogy ndeye yekutanga nhevedzano nemunyori weBasque Dolores Redondo Meira. Munyori akafuridzirwa nenzvimbo dzekumusha kwake kuti agadzire basa rake rekutsaurira, rinotenderera kuuraya kusinganzwisisike munzvimbo dzakasviba dzakatakurwa nezvinyorwa zvengano. Iyo inemagmatic protagonist, Amaia Salazar, ndiye mumiriri anotarisira kugadzirisa nyaya dzakaomarara, uko kutaridzika kunogara kuchinyengera. Nenzira, basa raDolores Redondo rave rakanaka zvekuti Amaia ari pakati pevatikitivha avo parizvino vari kugadzirisa mamiriro munyika.
Ongororo dzakagamuchirwa dzave - dzechikamu chikuru - zvakanaka kwazvo; inokodzera iyo trilogy sebasa remuenzaniso mukati mematsotsi emhando yemhandoIzvi zvinokonzerwa neruzivo rwemaitiro emapurisa anotsanangurwa. Maererano nepepanhau El Mundo. Muchengeti asingaoneki uye izvo zvakabata kupfuura vaverengi mazana manomwe ezviuru. Hazvishamisi kuti pane yatove firimu yakaburitswa muna 700.000 (inotungamirwa naGonzález Molina) nezve chitsauko chekutanga chesaga uye kuenderera kuri mberi kunotarisirwa.
1 Muchengeti asingaoneki
2 Nhaka mumapfupa
3 Kupa dutu
Muchengeti we ...
Yakaburitswa muna 2013, ndicho chitsauko chekutanga che Baztán Trilogy, inobatanidza vaverengi kubva papeji rekutanga nekutenda kunzvimbo dzayo dzizere nezvakavanzika uye ngano dzeBaztán Valley, uko kesi dzinogadziriswa dzinoitika. Iyo yakasarudzika yakavharirwa parizvino inogarwa nevanhu vachiri kutenda mukuvapo kwenhamba dzengano. Pakati pavo, Basajaun, hunhu hunodzivirira hwemasango hwakatsanangurwa naDolores Redondo.
Chinhu chinonakidza ndechekuti nekuda kweiyi nhevedzano yemabhuku, Dolores Redondo akakwanisa kuisa Baztán pakati peimwe nzvimbo dzakakurumbira muSpain dzinowanikwa mumabhuku.
Sezvo zviitiko zvinoitika, munyori zvishoma nezvishoma anopinza pfungwa yekugona kwezviitiko zvine chekuita nezvinhu zvakaenzana. Nenzira iyi, kuziva uye kufarira kuziva kukura kwezviitiko kunowedzera. Kubva pakutanga, muverengi anovhunduka nekuwanikwa kwechitunha chisina kupfeka chemusikana achiri kuyaruka yakaiswa munzvimbo yakaipa munzvimbo yeRwizi rweBaztán.
Zvisinei, mhosva yacho inoita kunge isiri yega; mwedzi usati mumwe kufa kwemusikana kwaitika (sezviri pachena mune zvinoitika zvinoenderana). Ipapo, muongorori wekuuraya Amaia Salazar anobva apinda mukuita, uyo anotora kuferefetwa kunyangwe achidzokera kumusha kwake (nzvimbo yaagara achida kutiza).
Kunetsana kwemukati kwem protagonist kwakabatana zvinoenderana nezvakazarurwa zvekuferefetwa kwakaomarara. Iyo rangano inoratidza mifananidzo yeiyo Amaia yekusagadzikana kwekare, kunyanya panguva ya1989, iyo nguva yehudiki hwake. Matambudziko asingakundike paudiki anokanganisa hukama hwake hwazvino nemurume wake James nemhuri yake yepedyo, yakaumbwa nehanzvadzi dzake Flora naRos, natete vake Engrasi.
Dolores Redondo anotumira zvakakwana manzwiro ekusahadzika zvachose kune yega yega hunhu hunoonekwa. Panguva imwecheteyo, hunhu hwakafanana hwehanzvadzi dzaAmaia natete vanobatsira zvakanyanya pakuzarura mibvunzo mune iyi kesi. Naizvozvo, kusagadzikana uye kusava nechokwadi zvinoramba zviripo kusvika kumagumo.
Izvo hazvigoneke mubhuku rino kusarega parutivi zvimwe zvinyorwa zvehupenyu zviripo mubasa, uye ndezvekuti hapana munyori anopunyuka pazviri. Chinhu chimwe ndechechokwadi, Dolores Redondo akararama hudiki hwakapfuma mungano dzevanhu, mamiriro akasimbisa fungidziro yake uye zvakakonzera iri basa rehunyanzvi.
Nhaka mumapfupa ...
Vhoriyamu yechipiri yeiyo Baztán trilogy (2013) musanganiswa unovhiringidza pakati perunako rwechokwadi nehutsinye. Basa racho rinotipa hunyowani hwaamai nyowani uye kutapira kwavo, pamwe nehukasha hwakakura hunogoneka nevanhu pavanotongwa nehuipi nemakaro.
Iko kusanganisa kunogona kutungamira kunetsekana - kunyangwe kunokanganisa - mapoinzi evaverengi vanoziva nekuda kweiyo frenetic kumhanya kwakagadzirwa nemunyori Dolores Redondo. Ehe, pane mamiriro asinganzwisisike asina tsananguro yakajeka, nekuti mhinduro dzinonongedzera kungano nyowani dzeBasque ngano. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kubata kwenyaya dzakakurumbira idzi nemunyori kunoreva kuferefeta kwakadzama uye kuzvipira kwakazara kune rake basa.
Zvese zvinhu izvi zvinogadzira Nhaka mumapfupa mubhuku chaizvo kupindwa muropa, kunyangwe kuneta kwakatapuriranwa naInspector Amaia Salazar uye nekuchimbidza kwakazara kunodiwa kufambisira mberi kuferefetwa. Uku kumhanya kunoenda kunopesana nekunetseka kwemunhu mukuru, uyo anobudirira zvakare nekurangarira zviitiko zvakakosha kubva munguva yake yakapfuura.
Mifananidzo yakaburitswa inojekesa hunhu husina kutsanangurwa hwababa vaAmaia mu Muchengeti asingaoneki, izvi zvinozorodza vaverengi vane ruzivo. En Nhaka mumapfupa inosimbisa kusangana kwesimba uye mashura masimba akakomberedza hupenyu hwomuongorori.
Mufananidzo wemunyori Dolores Redondo.
Mushure mezvose, kubva pakutanga kwe trilogy mashiripiti chave chiri chinhu chakajairika chekutaura nyaya. Kunyangwe mhedzisiro yaro inogona kusiya anopfuura muverengi mumwe akatsemukanekuti hunhu hwakakosha hauna kutaurwa zvakananga kusvika mapeji ekupedzisira ebhuku racho), zvakakodzera kuverenga, zviri, zviri nyore, basa rehunyanzvi.
Mushure mekugadzirisa kufa kunotyisa kwenyaya yeBasajaun gore rapfuura, Inspector Amaia Salazar anoita kunge ane pamuviri mukutongwa kwemhosho, Jason Medina, kuitira kuti amupe humbowo neuchapupu. Asi izvi hazvimboitike.
Kutongwa kwakamiswa nekuda kwekuzviuraya kweMedina mudzimba dzekugezera dzedare, achisiira Salazar katsamba kakanyorwa kuti "Tarttalo", ngano inoburitsa zano nyowani rekuuraya uye kutya muBaztán Valley. Icho chifananidzo chengano chakafanana neeccyclops inovhara veropa, vanodya nyama uye vasingagutsikane psychopath.
Tevere, pane hukama pakati pekuzviuraya kweMedina uye zvimwe zviitiko zvekuzviuraya kwevarume vevakadzi avo vakagura maoko emadzimai avo akaurawa. Panguva imwecheteyo, Salazar nevamwe vake vanofanira kuongorora kusanzwisisika kweguva uye tsika dzechienzi nemapfupa evacheche akaitika muchechi yeArizkun. Iyi mifananidzo yeropa inodzokororwa muchikamu chose. Iye munyori akazviisa zvine hungwaru kuti akanganisa muverengi panguva chaiyo uye amusiye akanamatira kunyaya, achimirira zvimwe.
Izvo pakutanga zvinotaridzika kunge zvidiki, zvidiki zvisina basa mapfupa, zvinobva zvabatana nekuzvarwa uye hudiki hwemukuru. Uye zvakare, haakwanise kuzvipira zvizere mukutsvagisa, izvi nekuda kwehukama hwake hwazvino. Kutya kukundikana saamai, pamwe nematambudziko muhukama hwake nemurume wake, zvinowedzera kumanikidza kuna Amaia. Iye asingakundike anounzwa kumagumo uye nekumhanyisa-mhanya kuguma kunozunungusa tsinga dzeanopfuura mumwe ane ruzivo muverengi.
Kupa dutu ...
Iri basa rakaverengerwa muzvivharo zvakawanda zvakatsaurirwa kumatunhu ekuongorora sekuvhara kwakazara kune iyo Baztán trilogy. With Kupa dutu, Dolores Redondo prodigiously anokwanisa kubatanidza mhosva dze Muchengeti asingaoneki y Nhaka mumapfupa. Munyori nekupenya anopa yakajeka kugadzirisa kwesarudzo yese yezvakavanzika, kutya uye ngano yakaitika muBaztán Valley.
Saizvozvowo, Inspector Amaia Salazar anoratidzwa neese akakanganisa uye hunhu, pasina mamiriro ezvinhu anowedzera. Saizvozvowo, Dolores Redondo anogumisa shanduko yeavo vese akakosha mavara e trilogy munzira yakanyanya. Uku kurapwa kunopihwa kune yega nhengo yenhaurwa nemunyori kwakakodzera kurumbidzwa. Munyori anoziva zvakadzika nuance yega, kufunga kwese uye hunhu hwezvinhu izvo zvandinogadzira, kusvika pakuzviita zvinovimbika uye zvinonamira.
Izvi zvinoitika mwedzi mumwe mushure mezviitiko zve Nhaka mumapfupa. Amaia anoenderera mberi achifungidzira kuti Rosario (mumwe wevanyengeri mune yechipiri vhoriyamu yetrilogy) achiri mupenyu. Zvese izvi zvisinei nekuti Mutongi Markina nemurume wake vanoti akafira mudutu. Chiito chinotanga apo Berasategui (mhondi iyo yakazviti Tarttalo) anofa pasina chikonzero chiri pachena muchitokisi chake..
Salazar anoongorora kufa kwevana vanoverengeka vacheche vanofungidzirwa nedhimoni Inguma. Ichi chinhu chinogonesa vacheche varere uye chinoyamwa hupenyu hwavo kuburikidza nekufema kwavo. Nekudaro, semuchikamu chechipiri chekutanga, mavambo erufu runoshamisa munhu wenyama neropa. Nekudaro, iyo tenzi nzira iyo Dolores Redondo anorondedzera nezve rangano inoita chero muverengi kusahadzika. Anogonesa zvinopfuura chimwe kuti chinzvimbo chedhimoni chiripo.
Dolores Redondo neiyo Planeta Mubairo.
Kugadziriswa kwenyaya iyi kunotora Salazar pasi munzira izere nekuvhunduka, uku achiratidza runyama uye rwevanhu divi rem protagonist.. Kana uchitsvaga kuzivikanwa kusingatarisirwe kwakakonzera kubuda kwezvinotyisa zveBaztán Valley, vaverengi vazhinji vatove vakajeka nezveiye mukuru anofungidzirwa.
Kuguma kwetatu kunosiya vamwe vanhu vakaodzwa mwoyo ne protagonist nekuda kwerudo rwake. Zvakadaro, zvinenge zvisingaite kuti vaverengi varege kunzwira tsitsi naye. Dolores Redondo akataura mubvunzurudzo neiyo terevhizheni yemuno muna 2016 kuti Amaia Salazar anogona kudzoka mune ramangwana. Munyori akataura: "Kunyangwe zvisiri nekukurumidza sekunge vamwe vangade." Tichafanirwa kumirira neshungu kudzoka kwehunhu hunoshamisa uye hwevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Iyo Baztán Trilogy
Anna laura mendoza akadaro
Ini ndichangoona iyi trilogy uye ndaida. Ndakaona bhaisikopo paNetflix ndikatanga kutsvaga, ndave kufa kutanga kuverenga mabhuku, ndinobva kuChihuahua, Mexico, saka ndinovimba ndinoawana.
Iniwo ndakada ongororo iyi. Kwaziwai !!
Pindura kuna Anna Laura Mendoza
Uye rini chikamu chechina cheiyi ritriology¨? Nekuti muchikamu chechitatu, ndoda kusvika kumagumo: Ndiani akafonera mukoti parunhare ndokumuudza kuti achekete mutsipa wake?
Vakadzi protagonists venhasi dema nhorowondo kumusha
Mhando yetsika: Zvinyorwa zvevakadzi zviripo here? Uye murume?